Shiinaha Gawaarida Boorsooyinka Alaabada Safarka ee Alaabada, Shirkadaha, Warshadaha - Xigasho - Dongguan Zhihao Industrybag Co.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dibedda > Boorsada safarka
Boorsada noocee ah ayaa buuxin karta baahida isticmaalayaasha safarka masaafada dheer? Ugu horreyntii, waa inaad tixgelisaa inay jiraan waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad u soo qaadato safarka dheer, sida dharka, laptop-yada shaqada iyo waxbarashada, iPad, musqulaha gaarka ah, alaabada daryeelka, kabaha iyo waxyaabo kale oo badan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u baahan tahay boorso safar aad u ballaaran. La degso walxaha aad u isticmaasho safarka masaafada dheer. Sidaa darteed, waxaan diyaarinay hagaha ugu wanaagsan ee lagu iibsan karo boorsada safarka xaaladdan:
1. Soo bandhigida alaabada boorsada safarka:
(1) Boorsadan boorsada ah waxay ka samaysan tahay 900D alaab dhar-biyood ah. Si loo kala saaro shey kala duwan si haboon, waxaan ugu tala galnay qaybo kala duwan boorsadan, waxaana ku soo kordhinay shaqooyin kala duwan, oo kaa dhigi kara xaalado kala duwan Si wanaagsan ayaad u isticmaali kartaa shaqeynta kala soocida boorsada.
(2) Waxaan u isticmaalnaa shay-qaab duug ah boorsooyinka safarka. Waxay leedahay dabacsanaan sare, taas oo si wax ku ool ah ugu kala firdhin karta xoogga garbaha, yareyn kara cadaadiska garbaha ee uu keenay culeyska, oo si fiican ugu duugi kara garbahaaga.
(3) Waxaa jira xarkaha taleefanka gacanta iyo muraayadaha indhaha oo ku xiran xargaha, iyo boorsada amniga ka hortagga xatooyada ee dhabarka. Suunka shandada ayaa si fiican loogu isticmaali karaa shandada. Markaad haysato boorso iyo shandad aad wada safri karto, waxaad ku dul laadin kartaa boorsada safarka shandada gawaarida, si aad u nasato garbahaaga una safarto si fudud.
(4) Waxaan si taxaddar leh u xulnay qalab tayo sare leh si aan u soo saarno boorsadan dhabarka ah, taas oo ka dhigaysa in boorsadu ay leedahay adeeg cimri dheer, xitaa haddii aad si isdaba joog ah u isticmaasho, wax saameyn ah kuma yeelanayso gabi ahaanba. Tiknoolajiyada wanaagsan ee harqaanka ayaa ka dhigeysa qaabdhismeedka boorsada safarka mid aad u xoog badan.
(5) Boorsadan safarka ah waxay kaa caawin kartaa inaad alaab badan xirxirto markii aad aadeyso masaafo dheer, sida: laptop-ka, joornaalada, dukumintiyada, Ipadka, dharka, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed, dhalooyinka biyaha, dalladaha iyo waxyaabo kale.
(6) Waxaan ku qalabaynay shandadan safarka ah dekedda lacag bixinta ee dibada ah, jaakada dhegaha, warqada iyo kiiska qalinka, boorsada laptop-ka gudaha, bacda gudaha ee iPad, boorsada dharka, bacda dhalada biyaha, dalladda dalada, jillaab fure iyo hawlo kale oo badan. Boorso dhab ah oo shaqeysa oo dhab ah.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) shandada safarka
Isticmaalka safarka fog
900D maro Oxford ah oo biyuhu xireen
Boorsada laba jibbaaran
Dhererka 44cmX Width 30cmX Dhererka 15cm
Hal badeecad oo ku jirta hal bac bac PE ah, 10 kumbiyuutar / kartoon
3. Sidee loo doortaa boorsada safarka ee wanaagsan?
(1) Ugu horreyntii, waa inaan doorannaa boorsada safarka ee laga sameeyay maaddada naylon, maxaa yeelay maaddada naylonku waxay leedahay isku dheelitirnaan kacsan oo xirashada isku dheelitirnaan iska caabin ah. Sidaa darteed, boorsooyinka safarka ee laga sameeyay nayloon waa aamin. Maaddada Nylon waxay leedahay dusha sare ee jilicsan iyo dhalaal wanaagsan, taas oo ka dhigaysa boorsooyinka laga sameeyay maaddada naylonka inay u muuqdaan kuwo aad u sarreeya.
(2) Boosku waa inuu weynaadaa, oo kaliya boosku waa weynyahay oo alaabooyin badan qaadi kara.
(3) Boorsada safarka ee shaqooyinka badan waxay ka dhigi kartaa safarkaaga mid aad u fudud. Dhammaan alaabooyinka waxaa loo habeeyay si habsami leh, si aysan ugu muuqan wax qasan, marin u helkuna waa habboon yahay oo dhakhso badan
(4) Boorsada safarka ayaa ka culus, waxaana loo baahan yahay laba xarig oo lagu duugo garbaha loona yareeyo culeyska si loo xaliyo dhibaatadan. Sidaa darteed, markaad iibsaneyso boorsada safarka, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid haddii suunka uu leeyahay shaqadan.
5. Xirxirida iyo bixinta boorsooyinka safarka
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 44cm X 30cm X 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadda iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka
(3) faahfaahinta xirxirida: 46cm X 32m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 8Kg
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 6.7Kg
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka boorsadan safarka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
(9) Haddii aad ubaahantahay muunad ka mid ah boorsadan dhabarka ah, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(1) Ka dib markii muunad la iibiyo, haddii daabacaadda koowaad ay u baahan tahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa muunadda iyadoo la raacayo faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash.
(2) Sanduuqayaga shirkadda wuxuu si joogto ah u ansax yahay oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
(3) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuu badbaadinno kharashyada.
(4) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
Q1: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar badan?
(1) Boorsadeena fudud waxay soo saartaa 50,000 oo xabbo maalintii iyo bil kasta 1,500,000
(2) Boorsooyinka gacanta oo farsamo aad u dhib badan, soo saar maalinle ah oo ka kooban 3,000 oo cutub iyo bil kasta oo soo saarta 100,000 oo unug
Q2. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soosaarka ballaaran?
Marka loo eego heerka tiknoolajiyada wax soo saarka iyo dhibaatada alaabada la habeeyay, hagaaji wareegga wax soo saarka ee kor ku xusan. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso sawirada la bixiyay ama shaybaarada si loo go'aamiyo wareegga waxsoosaarka saxda ah
(1) Waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka bixiso khidmadda degdegga ah ee Shiinaha illaa waddankaaga
Q4. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
Q5. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q6. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
S7: Ma leedahay xad MOQ ah?
(1) Haa, waxaan aqbalnaa kormeerka dhinac saddexaad
(2) Warbixinta tijaabada alaabada waa la bixin karaa
(3) Waxaan nahay soo saare Disney boorsooyinka safarka, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Q9. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
A: Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno email-kaaga wax lagu weydiiyo
Q10aad. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
(2) Wareegga xigashada ee sheyga keliya waa 12 saacadood, iyo wareegga oraahda Dufcaddii waa 2-3 maalmood
(3) Qaabka xigashada: sicirkii hore ee warshadda, FOB, CIF
(4) Haddii aad u baahan tahay oraah, fadlan la soco habka oraahda, taas oo noo oggolaaneysa inaan si wanaagsan kuu soo xigano
Q11: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Calaamadaha kulul: Boorsada safarka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka